Banijya News | » बच्चाको ओछ्यानमै पिसाब गर्ने समस्या छ ? यी हुन् समाधानका उपाय बच्चाको ओछ्यानमै पिसाब गर्ने समस्या छ ? यी हुन् समाधानका उपाय – Banijya News
बच्चाको ओछ्यानमै पिसाब गर्ने समस्या छ ? यी हुन् समाधानका उपाय
बच्चाहरुले अक्सर ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने गर्छन् । यो उनीहरूको सबैभन्दा प्रमुख समस्या मध्ये एक हो। बच्चा ठूलो हुँदै गएपछि उनीहरुको यो बानीमा पनि परिवर्तन आउने भएतापनि कतिपय बच्चाले पिसाब नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । यसलाई चिकित्साको भाषामा ‘ब्लाडर कन्ट्रोल प्रब्लम’ भनिन्छ ।
यस्तो समस्या विभिन्न कारणले हुनसक्छ । पिसाब जम्मा हुने थैलीको क्षमता कम भएको खण्डमा, पिसाबको संक्रमण, बच्चाको मेरुदण्डको पूर्ण विकास नहुनु, मनोवैज्ञानिक असर, परजीविहरूको संक्रमण लगायतका विभिन्न कारणले गर्दापनि यो समस्या देखा पर्दछ। सामान्यतया बच्चाहरुले २ देखि ४ वर्षको उमेरमा नै पिसाबको थैलीलाई नियन्त्रण गर्न सिक्छन् यदि यो उमेर बढ्दै जादा नियन्त्रणमा आएन भने समाधान खोज्नुपर्नेहुन्छ ।
उसो भए रोकथाम के त?
सबैभन्दा पहिले त बच्चाको जीवनशैलीमा ध्यान दिनसके आधाभन्दा बढी समस्या आफैँ हट्छ । यसको मतलब बच्चालाई मनोवैज्ञानिक समर्थन आवश्यक छ । अर्थात् लाज र डरको अनुभूतिलाई कम गराउने, परिवार तथा नजिकका आफन्तहरूले बच्चाहरूसँग आफ्ना अनुभवहरू सुनाउने,बच्चालाई ढाडस दिने र उनीहरुको आत्मबल बढाइदिने लगायतका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, बच्चा राती सुत्नु अघि र सुती सुकेको दुइघण्टापछि पिसाब फेराउने, बिहान स्कुल जानुअघि, स्कुलमा र स्कुलबाट फर्केपछि फेर्न लगाउनुपर्छ। यसो गर्दा समय–समयमा शौचालय जाने बानी पर्छ र समस्या बिस्तारै कम हुँदै जान्छ ।